स्मार्टफोन ट्रिक्स : के तपाइको मोबाइलको प्याटर्न बिर्सियो? यस्तो गर्नुहोस - Dainikee News::
स्मार्टफोन ट्रिक्स : के तपाइको मोबाइलको प्याटर्न बिर्सियो? यस्तो गर्नुहोस
हिजो आज मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो फोनको सुरक्षामा धेरै ध्यान दिने गर्दछन, आफ्नो फोन सजिलै अरुले चलाउन नसकोस भनेर आफ्नो फोनमा प्याटर्न वा पिन लक राख्ने गर्दछन । तर कतिपय पटक यस्तो हुन जान्छ कि आफुले राखेको पिन वा प्याटर्न लक भुलिन्छ ।
यसरि फोनको सुरक्षाको लागि राखिएको लकले हामीलाई निक्कै ठुलो समस्यामा पारिदिन्छ । यहि समस्या बाट छुटकारा पाउनको लागि आज हामी तपाईहरुलाई यस्तो उपायहरुको बारेमा जानकारी गराउदै छौ जसले तपाइले आफ्नो फोनमा रहेको फोनको लक सजिलै हटाउन सक्नु हुन्छ ।
१ एण्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर
प्याटर्न वा पिन लक बिर्सेपछी त्यसलाई सजिलै हटाउनको लागि एण्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरको मदत लिन सकिन्छ । आफ्नो फोनमा राखिएको जिमेल वा गूगलको अकाउन्ट संग एण्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर लिंक भएको हुन्छ । यसै एकाउन्टबाट एण्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरको मदतले तपाइले आफ्नो फोनमा राखिएको पासवोर्ड, पिन वा प्याटर्न बदल्न सक्नु हुन्छ ।
त्यसको लागि तपाइले आफ्नो कम्प्युटरमा गूगलको यो वेबसाइट खोलेर ( https://www.google.com/android/find) त्यसमा फोनमा राखिएको गूगल/जिमेल अकाउन्टबाट साइनइन गर्नुहोस ।
अब त्यहाँ तपाइको फोन देखा पर्छ र तपाइले सेक्युरेटी लक परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ । यसको लागि तपाइको फोनमा इन्टरनेट भने कनेक्ट हुनु पर्दछ ।
२. फरगट प्याटर्न/ पास्वोर्ड/ पिन
आफ्नो मोबाइलमा राखिएको प्याटर्न बिसिर्यो भने फरगट प्याटर्न अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो गूगल अकाउन्ट डिटेल ( जिमेल आइडी र पासवोर्ड )राखेर पनि बिर्सिएको प्याटर्न परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
३. फ्याक्ट्री रिसेट
प्यार्टन लक् अनलक गर्ने सबै भन्दा सजिलो तरिका हो फ्याक्ट्री रिसेट । तर यसो गर्दा फोनमा भएका सबै डाटाहरु भने डिलेट हुन्छन । आफ्नो फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस । अब भोलुम अप बटम, होम बटम र पावर बटम एक्कै साथ थिच्नुहोस । केहि समय पछि स्क्रिनमा केहि बिकल्पहरु देखिने छन् ।त्यसमध्ये फ्याक्ट्री रिसेटको अप्सन छान्नुहोस् र सजिलैसंग प्याटर्न लक परिवर्तन गर्नुहोस ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर ३, २०७५ /Monday, November 19th, 2018, 4:48 pm